अ‍ागामी ५ वर्षमा गाेरखामा अ‍ामूल परिवर्तन देखिनेछ : मेयर रानामगर « Lokpath
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गोरखा नगरपालिकाकाे मेयरमा कृष्ण रानामगर विजयी भए । स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा जोसँग हारेका थिए, रानामगरले उनैलाई हराएर गोरखा नगरपालिकाको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । पाँच वर्षअघि कांग्रेसका राजनराज पन्तसँग निकटतम प्रतिस्पर्धी बनेर हार व्यहोरेका उनले अहिले पन्तलाई नै हराए ।
मेयर रानामगर आगामी पाँच बर्षको कार्यकालका लागि मेयर पदको कुर्सीमा बसेर नगरपालिकामा नेतृत्व गर्न थालेको एक महिना बितेकाे छ। १४ वटा वडा रहेको यस नगरपालिकामा मेयर रानामगरको अबको कार्यकाल कसरी बित्छ ? नगरवासीको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने भावी योजनाहरु के के छन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी :
गोरखा नगरपालिकाको नेतृत्व समाल्न थाल्नु भएको महिना दिन बित्यो । मेयरको कुर्सीमा बसेर हेर्दा एक महिनामा नगरपालिका भित्रका समस्या, सम्भावना र चुनौतीहरु के-के देख्नुभयो ?
गोरखा नगरपालिकाको हकमा यहाँ विगतका जनप्रतिनिधिहरूले एक हिसावले काम गर्नु भएको थियो । त्यसको मुल्याङ्कन यहाँका आम नागरिकहरुले गर्नुभएकै छ, त्यो विषयमा म धेरै भन्न चाहान्नँ । तर, अहिले म जब नगरपालिकाको नेतृत्वमा आएँ, मैले र मेरो टिमले यहाँ धेरै समस्याहरु देखेका छौँ । हामीले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् ।
जनताको नगरपालिका प्रति थुप्रै आशा र भरोसा छ । त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने केही विशेष कामहरूको सूची पनि बनाएका छौँ । जुन हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा पनि थियो । म बोलेर भन्दा पनि काम गरेर देखाउनेमा विश्वास राख्छु । गोरखाकै सदरमुकाममा यस नगरपालिका पर्ने, त्यहीँ माथि थुप्रै सम्भावना बोकेका र चर्चित पर्यटकीय गन्तव्यहरू पनि यहीँ छन् । यहाँको विकास र आर्थिक रुपान्तरणको एउटै आधार पर्यटन हो भने चौतर्फी विकास मेरो मूल एजेण्डा हो ।
अनि यहाँको विकास र समृद्धिको सम्भावना छन्, त्यसको प्राप्तिका लागि म अनि मेरो टिम पूर्णरुपले लाग्नेछ । चुनौतीका कुरा गर्दा नगरपालिकासँग सीमित स्रोत साधन हुन्छ । तर, जनताका आकांक्षाका चाङ छन् । सबैका ईच्छा, अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न चुनौती नै छ । यद्यपि आम नगरवासीको चाहना, मनोभावना र आवश्यकताको मुल्याङ्कन गरेर म काम गर्नेछु ।
जनप्रतिनिधिको एउटै काम भनेको जनताको सेवा गर्ने र विकासका रणनिती खाका बनाउने हो । त्यसो भएकाले अरुले भन्दा फरक के गर्ने रु भन्ने छैन । तर, तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ नगरपालिका भित्र थुप्रै समस्या र जटिलताहरु छन् । म मेरो पाँच वर्षे कार्यकालभित्र नगरपालिका भित्रका र आम जनताका समस्यालाई समाधान र न्यूनीकरण गर्दै भएको स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै जनताले अनुभूत गर्ने गरी परिणाममुखी काम गरेर देखाउने लक्ष्य छ ।
अनि कुनै वडासँग प्लान गरेर पहिला गरेको कामभन्दा अलि फरक खालको काम त्यहाँकै मानिसलाई टिम बनाएर मासिक तलब नै दिएर गर्न लगाउने सोच छ । सुरुको अगामी वर्ष परीक्षण गर्न लगााएर कुनै एक वडामा जुनसुकै योजना सम्पन्न गर्न कुनै पनि बाहिरी साधन डोजरको पनि परिचालन नगराउने स्थानीयहरूले नै सक्ने गरी काम गर्न लगाउने लक्ष्य छ । यो ट्रायलको रुपमा नमुना परीक्षण गर्ने हो ।
सबै काम स्थानीय टिमले नै गर्दा कम्तिमा त्यहाँका ४०,५० देखि १०० जनाले रोजगारी पनि पाउने भए । यसो गर्दा वर्षभरि वडामा कतिको फरक ल्याउँछ रु त भन्ने पनि परीक्षण हुन्छ । त्यसकारण यो छुट्टै खालको योजना बनाएर अगाडि बढ्न मन लागेको छ । जुनचाहि नमुना बनोस्, अरुले पनि अनुशरण गरोस् । त्यो वडामा आएको परिवर्तनले सबै वडाले हामी पनि यसरी नै काम गर्छौं भन्ने खालको मनसाय राखोस् भन्ने चाहेको छु । योजना बनाउँ पहिला कस्तो हुन्छ रु रोजगारी र्सिजना गर्ने कुरा चाँही अगाडि बढ्छ जस्तो लागेको छ । वडाको बिकास वडाकै सब मिलेर गर्ने, त्यस्तो खालको बिकासे योजना बनाउँदै छु त्यस्तो हुँदा वडाका सबैको आय बढ्छ ।
अर्को भनेको हामीले गर्नुपर्ने कामको तत्कालीन र दीर्घकालिन योजना बनाउँछौँ । तत्कालीन भनेको तत्काल जनताका आवश्यकता पुरा सकिने खालका योजना हो । मुख्य त दीर्घकालीन योजना बनाएर हामीले भनेअनुसार पर्यटनको विकास गर्ने, कृषिमा आधुनिकीकरण सँगसँगै व्यावसायिक पशुपालनको विकास गर्ने, घरेलु उद्योगको विकास गर्ने, यी तीन वटाकुरा हामीले मुख्य मानेका छौँ । त्यसको साथसाथै स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीको सहज पहुँच पुर्‍याउने । सडकमा भने नयाँ बाटो खन्नुभन्दा भएकाका स्तरोन्नति गर्ने र स्तरोन्नति भएकामा कालोपत्रे गर्न गरि योजना अघि बढाएका छौँ । मुख्य कुरा उत्पादनसँग जोडेर विकासका रणनीतिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने हाम्रो तयारी छ ।
अर्को कुरा मलाई के लागेको छ भने अहिले हाम्रो एउटा हाम्रो डीपीआर बनाउने छौँ । लगभग दरौदीको कुरा गर्‍यो भने उदाहरणको लागि त्यहाँ एउटा छुट्टै बगर बन्ने ठाउँ छ । त्यतातिर एउटा बाध हाल्दिने , ताल बनाइदिने त्यसकै तालबाट दुईपटी खेत छ, त्यहाँबाट कुलो पठाउने त्यसपछि हरेक वर्ष नदीले बगाएर ल्याएको ढुँगा गिटीहरू थुर्पाछ हरेक वर्ष त्यो झिक्ने त्यसो गर्‍यो भने माथि धेरै उत्खनन गर्न नपर्ने त्यस्तो खालको लागेको छ मलाई । यो दीर्घकालीन कुराहरू हो तत्कालीन चाँही सम्भव छैन ।
करौडौँ खर्च हुन्छ, त्यही पनि त्यो गर्न पायो भने अन्यत्र गएर जहाँ समस्या छ, जनताले यो बेठिक भनिराछ, त्यहाँ गएर उत्खनन् गर्नुपर्दैन् । अर्को कुरा सकेसम्म नदीमा डोजर चलाउने कुराहरू विस्तारै निषेध गर्दै सन्तुलित रुपमा उत्दनन् गर्नेछौँ । अबैध रुपमा उत्खनन् गर्न दिने छैनौँ, त्यसो भएको पाइएमा कानुुनत कारबाही हुने नै छ ।
अब यो सार्वजनिक जग्गा, निजी जग्गा, सरकारी जग्गा गरी तीन प्रकारको जग्गा छ । अब साधारणतया निजी जग्गावालाहरूले सरकारी जग्गा च्याप्ने यो समस्या सबै ठाउँमा व्याप्त छ । यो पनि एक प्रकारको समस्या नै हो र यस समस्यालाई समाधान गर्न दुईवटा कुरा गर्ने हो एक राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको छ । यसले सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, जग्गा दिने र लालपुर्जा पनि दिने आयोग सञ्चालन भएको छ ।
र, दोस्रो कुरा दलित सुकुम्बासीहरुलाई पनी व्यवस्थित गर्ने र तेस्रो अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि उनीहरूले पहिलादेखि खेती गरिआएको छ भने त्यसलाई पनि निश्चित रकम दिएर जग्गा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ, त्यो एउटा पाटो भयो अर्को पाटोचाहिँ सार्वजनिक, निजी , सरकारी गरी छुट्याएर वर्गाीकरण गर्ने हो, यसका लागि हामी कोसिस पक्कै गर्नेछौँ ।
यो फुटपाट व्यवस्थामा असाध्यै समस्या छ । गोरखा बजारमा बजारैसम्म यो हाई(वेको अवधारणा भएको हुनाले पहिला त अब २५ मिटरकै समस्या छ । यो समस्या लामोदेखिकै हो । त्यसलाई समाधान गर्न नसक्दा बजारमा भएको घरहरू दर्ता भएको छैन र अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यो त एउटा समस्या छँदैछ, तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि बजार त चलिरहेकै छ, यही बजार चल्नको लागि व्यवस्थित फुटपाटको योजना बनाउनुपर्दछ । मैले के सोचेको छु भने हरेक घरको अगाडि एउटा सुुन्दर बिरुवा हुर्काएर लग्ने योजना मैले नीति ल्याएको छु ।
यसमा अवश्य सफल भइन्छ भन्ने लागेको छ । फुटपाथमा अस्ति भर्खर एउटा टिम डेडिकेसन आएको थियो, फुटपाटमा बसेर व्यापार गरौँ भनेर आएको थियो, त्यसलाई पनि सम्भव भएसम्म तरकारी बजार एक ठाउँमा र अर्कौ बजार एक ठाउँमा, फुटपाथ अलि ठुलै यो भन्दा पहिला बनाएको बेठिक छ फटपाथ होकी हैन जस्तो लाग्छ । यो हरमटारीको बजार देखेर अरुको अगाडि नि के हो रु के हो रु जस्तो १ अब सम्भव भयो भने, बजेट भयो भने अलि व्यवस्थित फुटपाट बनाउने त्यस्तो खालको योजनामा छौँ ।
सबैलाई करको दायरामा ल्याउनलाई योजना बनाएर परिचालन नै गर्नै हो । हामीले सबैको घरघरमा नम्बरिङ गर्ने योजना छ । यसको कारणले कति नम्बरको घरमा भएको कुन व्यवसायिले घरको र व्यवसायको कर तिर्न आयो रु आएन सहजै हेर्न सकिन्छ । यदी, कोही नआएको खण्डमा चिठी पठाएर भए पनि करको दायरामा ल्याउने र त्यति गर्दा पनि नआउनेहरूका लागि नगरको कानुनअन्तर्गत जे छ, त्यही गर्ने योजना लिगेका छौँ ।
हो यो साँचो हो, किसानहरुलाई दिएको वास्तविक अनुदान वास्तविक कृषकसँग पुग्न नसकेको कुरा धेरै आएको छ । त्यो फेरि वास्तविकता पनि छ । त्यसो गर्न नै हुँदैन् । हुन त हामी आएर त्यसो गरेका त छैनौँ, हैनौँ । तर, अब हामी त्यसो गर्दैनौँ र गर्न दिन्नौँ । फिल्डमा नै पुगेर को वास्तविक किसान हो रु र कसले अनुदानको लागि मात्रै किसान भए जस्तो गरेको छ रु त्यसको परीक्षण गरेर मात्रै यस्ता खाले कार्यक्रमहरु गर्नैछौँ ।
गोरखा आउने पर्यटकहरूलाई एउटा त मनास्लु पदमार्गमा जाने पर्यटकहरू बढी हुन्छन् । तिनीहरू धेरै वर्ष अगाडि गोरखा हुँदै जान्थे पछि कहाँबाट टुट्यो त्यो अहिले अधिकांश आरुघाट हुँदै माछाखोला जाने भयो त्यसलाई गोरखा हुँदै जानुपर्ने वातावरण कसरी बनाउने रु त्यो हाम्रो योजना हो र अर्को मनकामना, बन्दिपुर आउने पर्यटकहरूलाई कसरी गोरखा ल्याउन सकिन्छ रु त्यो पनि हामी कोसिस गर्नेछौँ ।
आगामी पाँच बर्ष भित्र गोरखा नगरपालिका कस्तो बन्ला रु केही खाका कोर्नु भएको छ ?
गोनपा कस्तो बनाउने भनेर हामीले चुनावी अभियानका समयमा प्रशस्त चर्चा गरेका छौं । त्यसलाई हामी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने छौं । सबैभन्दा पहिला त सुशासनका सबै प्रत्याभूति कसरी दिन सकिन्छ रु भ्रष्टाचार मुक्त बिकास कसरी गर्न सकिन्छ रु भन्नेमा हामी प्राथमिकतामा राख्छौँ । यो पहिलो ६ महिनामा यति मिलाएपछि अरु दीर्घकालीन विषय जस्तै बसपार्क व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन, शिक्षालाई समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुलीलाई जनताका सरोकारका विषय बनाएर सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने लगायतमा काम गर्नेछौं । यस्तै गोनपामा झट्ट देख्दा देखिने खालका परिवर्तनका लागि केही परियोजनाहरू छन् त्यसलाई हामी लागू गर्छौ । यस्तै, पर्यटकहरू गोरखा किन आउने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने गरी व्यवस्थापन गर्नेछौं ।
५ वर्षमा सकिने बेलामा हाम्रो नगरमा जनताले उल्लेख्य परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्ने गरि काम गर्नेछौँ । समग्र रूपमा उत्पादनमुखी विकासमा जोड दिँदै नगर र नगरवासीहरुको अर्थतन्त्र सुधार्ने कार्यक्रमहरू गर्नेछौं ।
प्रकाशित मिति: २०७९,असार,९,बिहीवार २१:३५